मालिंगा पनि तानिए सेक्स स्क्यान्डलमा , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मालिंगा पनि तानिए सेक्स स्क्यान्डलमा
एजेन्सी । श्रीलंकाका स्टार बसलर लासिथ मालिंगमाथि एक अपरिचित युवतिले यौनदूव्र्यहारको आरोप लगाएकी छन् ।
आईपीएल सिजन १० का क्रममा भारतको मुम्बईस्थित एक होटलमा मालिंगाले ती यूवतिमाथि दुव्यर्वहार गरेको तमिल गायीका श्रीप्रदाले ट्वीटरमार्फत जानकारी दिएकी छन् ।
श्रीप्रदाका अनुसार ती युवति मुम्बईको एक होटलमा आफ्ना साथीलाई खोजिरहेकी थिइन् । मालिंगाले ती साथी आफ्नो रुममा रहेको भन्दै उनलाई आफ्नो रुममा लगेका थिए । त्यसपछि ती युवतिलाई धक्का दिएर बेडमा पल्टाएका थिए । र उनीमाथि चढेका थिए ।
श्रीप्रदाका अनुसार त्यसपछि होटलको स्टाफले रुमको ढोका ढकढक्याएपछि मालिंगा ढोका खोल्न जाँदा ती युवति बाथरुममा लुकेकी थिइन् र स्टाफ बाहिर नजाँदै आफै बाहिरिएकी थिइन् ।
यी युवतिको यस्तो आरोप लागिरहँदा मालिंगा भने श्रीलंकामा इंगल्याण्डसँगको घरेलु एकदिवसीय क्रिकेट खेलिरहेका छन् ।
मालिंगा आईपीएलमा मुम्बई इन्डियन्सका तर्फबाट पहिला खेलाडी थिए भने हाल मेन्टटरका रुपमा जोडिएका छन् ।
मालिंगा आईपीएलका सबैभन्दा सफल बलरमात्र होइनन् श्रीलंकाका लागि पनि त्यतिकै सफल बलर हुन् ।